Nkwado-Ningbo CHEM-PLUS & JW FILM
KPAL Nkwado ndị teknuzu
JW Ihe nkiri / ihe osise pụrụ iche na-echebe ihe osise. Anyị debanyere nkwenkwe na anyị ga-enwe ihe ịga nke ọma dịka ndị ahịa anyị. Otu akụkụ dị mkpa nke otu anyị si akwado mbọ nke ndị ahịa anyị bụ site na ọrụ nkwado dị elu anyị.
Ọ bụ ezie na ndị ọrụ enyemaka anyị ga-enyere gị aka na Mọnde site na Fraịdee site na 8:30 nke ụtụtụ ruo 5:30 nke mgbede, enwere ike idozi nsogbu site na nkwado ntanetị. N'ebe a, ị ga-ahụ ntuziaka nwụnye zuru ezu, azịza nye ajụjụ a na-ajụkarị, ndụmọdụ ntinye, yana foto ntinye ntinye na obere vidiyo. Ọ bụrụ na ịnweghị ike idozi nsogbu ọrụ aka ahụ mgbe ị na-eme nchọgharị na saịtị ahụ, ịnwere ike ịhọrọ ịkpọtụrụ ngalaba ọrụ nkwado anyị site na ekwentị na 0086-574-89257752, ma ọ bụ zitere anyị arịrịọ site na ụdị nkwado anyị.
Akwụkwọ ikike Uche
JW Ihe nkiri / ihe osise pụrụ iche na-echebe ihe osise. Inwere onwe nke nrụrụ nrụpụta maka afọ ise site na ụbọchị ịzụta. Mkpuchi ntụpọ gụnyere: ịcha ụcha, ịchacha, ịgbawa, blistering na delaminating.
Iji tinye akwụkwọ ikike, gbalịa ịkpọtụrụ onye nrụnye KPAL nyere ikike nke rụwara nrụnye ahụ. N'ihe omume ị nweghị ike ịkpọtụrụ onye izizi kpal nyere ikike maka ihe ọ bụla, biko kpọtụrụ KPAL. Ikwesiri idowe kaadị ikike ahụ, otu nnata nke nnata gị nke na-achọpụta mpaghara mkpuchi ma zigara KPAL ka achọrọ ka ịhazi nkwupụta gị. Maka nkwuputa ziri ezi, KPAL ga-enwe onye nrụnye KPAL nyere ikike wepu ma tinyeghachi ihe nkiri KPAL na mpaghara nchekwa kpebiri na akwụkwọ ikike ahụ gụnyere akụkụ na ọrụ.
The akwụkwọ ikike na ịgba akwụkwọ kọwara n'elu bụ nanị akwụkwọ ikike dịnụ. Ndị nrụnye KPAL nyere ikike enweghị ikike ịgbanwe ma ọ bụ gbatịa ikike na ụdị ejiji ọbụla. KPAL ga-abụ naanị ọrụ maka ịchọpụta izi ezi nke nkwupụta niile ma nwee ikike ịgọnahụ azịza ndị na-erughị njirisi dịka akọwara n'elu. nnọchi ihe nkiri ahụ nwere nkwarụ, gụnyere akụkụ na ọrụ, bụ ihe ga-egbo mkpa ya; ibu anaghị agbatị na mmebi ndị ọzọ, nke na-adabara, nke bara uru, ma ọ bụ na nke ọzọ. Nkwụghachi ụgwọ maka ụgwọ ọrụ nke akwụkwọ ikike a kpuchie ga-eme ozugbo na onye nrụnye kpal nyere ikike ma gụọ ya site na iji enyemaka mkpuchi nke KPAL bipụtara.